Karazana sira rock Himalayas blocs salt mavokely 8x4x2
Ny vokatry ny biriky kristaly sira:
Volatilize ny ion ratsy, mamelombelona ny rivotra ary manamaivana ny havizanana. Ny fanandramana dia naneho fa rehefa avy nafanaina ny sakana sira kristaly, dia afaka mampiova ny ion ratsy, izay vitaminina amin'ny rivotra, izay afaka manatsara ny kalitaon'ny rivotra sy mandrindra ny fihenjanana, toy ny mankafy ny fandroana ala mamelombelona.
Anti-inflammatory sy sterilization, detoxification ny hoditra. Iaraha-mahalala fa misy fiantraikany amin’ny areti-mifindra sy antiseptika ny sira, ilay antsoina hoe “fafafy sira ny fery”. Ny fandroana sira = 3 manadio ny kibo, izay afaka manala poizina tsara ny hoditra.
Sarimihetsika miaro ny hoditra voajanahary, mihidy amin'ny hamandoana tsy misy fatiantoka. Izany dia satria ny sira kristaly dia manarona ny hoditra ary manidy ny hamandoana, ka mahatonga ny hoditra ho sarimihetsika fiarovana voajanahary, izay mahatonga ny hoditra aorian'ny fandroana tena malama sy elastika. Ny fampiasana matetika dia mety hahatonga ny hoditry ny vatana manontolo ho malefaka sy mamirapiratra!